Spook.js, nzira nyowani yekushandisa kushomeka kweSpecter muChannel | Kubva kuLinux
Spook.js, nzira nyowani yekushandisa kushomeka kweSpecter muChannel
Boka revaongorori kubva kumayunivhesiti eAmerica, Australia neIsrael akataura izvozvo yakatsanangura nzira nyowani yekurwisa iyo inobvumidza kushandisa kusagadzikana Specter kirasi pane Chromium-inofambiswa mabhurawuza.
Kurwiswa kwacho, codenamed Spook uye kuverenga zvirimo munzvimbo yese yekero yemaitiro azvino, ndiko kuti, kuwana iyo data yemapeji anoitwa mune mamwe ma tabo, asi ayo anogadziriswa nenzira imwecheteyo.
Kumwe kushandiswa kwenzira iyi kurwisa kwema plugins, iyo inobvumidza, kana plug-in inodzorwa nemurwisi yaiswa, kutora data kubva kune mamwe ma plug-ins.
Spook.js inoshanda kune chero browser kubva paiyo Chromium injini, kusanganisira Google Chrome, Microsoft Edge, uye Brave. Vatsvagiri zvakare vanotenda kuti nzira yacho inogona kuchinjika kuti ishande neFirefox, asi sezvo injini yeFirefox yakanyanya kusiyana neChannel, basa rekugadzira kushandisa kwakadai rakasiiwa kune ramangwana.
Sezvo mhando yechinhu chakaipa isingaenderane nerudzi rweakarongedzwa ari kugadziriswa, pasi pemamiriro akajairwa zviito zvakadaro zvakavharirwa muChannel neiyo deoptimization mashini yekodhi inoshandiswa kuwana iwo arrays. Kugadzirisa dambudziko iri, iyo Type Confusion yekurwisa kodhi inoiswa mu "if" mamiriro ane mamiriro, asingatsve pasi peyakajairika mamiriro, asi inomhanya nenzira yekufungidzira, kana processor isina kufanotaura mamwe matavi.
Nekuda kweizvozvo, processor inofungidzira inowana iyo yakaburitswa 64-bit pointer uye inodzosera nyika mushure mekuona fungidziro yakundikana, asi maratidziro ekuuraya akaiswa mune yakagovaniswa cache uye inogona kudzoreredzwa uchishandisa nzira kuona zviri mukati meiyo cache kuburikidza neyechitatu- pati dzepati, kuongorora shanduko munguva yekuwana kune yakachengetwa uye isina-cached dhata.
Pakupedzisira vaongorori vanotaura izvozvo yakakwanisa kugadzirira mashandiro ekushandisa masisitimu akavakirwa paIntel uye Apple M1 processor, iyo inopihwa mukana wekuronga kuverenga kwendangariro kumhanya kwema500 byte pasekondi uye kurongeka kwe96%. Maitiro acho anofanirwa kuve anoshanda kune AMD processor, asi zvaisakwanisika kugadzirira zvizere zvinoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Spook.js, nzira nyowani yekushandisa kushomeka kweSpecter muChannel
Iyo nyowani vhezheni yeRPM 4.17 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Njodzi dzakawanikwa mune vazhinji veMatrix vatengi